Baarlamanka Puntland oo guddiga abaaraha ku wareejiyay 100 booyadood oo biyo ah – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta lacag lagu iibinayo biyo waxay ku wareejiyeen wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, taas oo madax u ah guddiga wax ka qabashada arrimaha abaaraha ee ay dowladdu saartay bishii maarso.
Kulan ka dhacay xaruunta golaha wakiillada ayaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad iyo gudoomiye ku xigeenka golaha wakiillada Avv. Cabdicasiis Cabdullahi Cismaan waxay kaga wada-hadleen arrintan.
War ka soo baxay kulanka labada masuul ayaa lagu sheegay in golaha wakiillada Puntland ay guddiga abaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejiyeen 100 booyadood oo biyo ah oo loogu talagalay gurmadka abaaraha.
Dowladda Puntland ayaa teer iyo bishii maarso ku hawlanayd wax ka qabasahda xaaladda jiilaalka oo ka sii daraysay, in kastoo roobabku ay hadda ka curteen gobolada qaybtood. Meelaha qaarkood waxaa dowladdu sheegtay in ay ka samaysay biyo-dhaan iyo raashin qaybin bishii Abriil ee ina dhaaftay.